ဘင်္ဂလားနဲ့မြန်မာစစ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက် ပြ သော အ ချက် များ – ( ရောဘတ်အယ်လ်ဟို့စ်) | Burma Muslim
The Voice Of Myanmar Muslim
ဘင်္ဂလားနဲ့မြန်မာစစ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက် ပြ သော အ ချက် များ – ( ရောဘတ်အယ်လ်ဟို့စ်)
By burmamuslim on June 1, 2014	မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလား စစ်ဖြစ်ဖို့ ဖိန့်လုံးတွေ လှိမ့်လုံးတွေ နဲ့ လုပ်နေသူတွေအတွက် တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဖိန့်နေသလို ဗမာနဲ့ ဘင်္ဂလား စစ်ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငတုံးတွေကသာ အဟုတ်ထင်ယုံချင်ယုံ။ ကျူပ်တော့မယုံဘူး။ ဒီတော့ ဘင်္ဂလားနဲ့ စစ်ဖြစ်ရင် ဘယ် ဖက်ပါမလဲ ဘာညာ ပေါတောတော မေးခွန်းတွေ မေးတဲ့သူတွေ နဲ့ ဖြေတဲ့ သူတွေ အကုန် လုံး ကျပ်မပြည့် သူတွေလို့ပဲ တင်စားချီးမွှမ်းချင်တယ်။
၁။ တရုတ်ကြီးက သူ့ရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဓရာ မိန်းထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်နယ် စပ် လိုနေရာမှာ ဘယ်တော့မှ စစ်အဖြစ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်က အိန္ဒိယကို ၀ိုင်းပတ် ပိတ် ဆို့ ထားရေး မဟာပုလဲသွယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကို လုပ်နေဆဲသာ ဖြစ်ပြီး လက်စသတ်ဖို့က အများကြိး ပြင်ဆင်နေရဆဲ ကာလမှာ ဒိစီမံကိန်းအ တွက် အသုံးတော်ခံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားရော၊ မြန်မာမှပါ ကြီးကျယ်တဲ့ စစ်ေ၇း ပဋိပက္ခ တွေကို ခွင့်ပြုဖို့ မရှိဘူး။
ဘင်္ဂလားရော၊ မြန်မာရော နှစ်နိုင်ငံစ လုံးက တရုတ်ပြည်ကြီးက သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင် ကြိုက် သလို အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ အခု ရောက်နေတယ်။
၂။ မြန်မာရော ဘင်္ဂလားရော နှစ်နိုင်ငံစလုံးကလည်း လုံးဝ စစ်အဖြစ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့နှစ်နိုင်ငံစလုံး ရဲ့ အမျိူးသားအကျိူးစီးပွားဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ထဲက အဓိက ပြောရရင် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့သိုက် တွေက ရကာစ မြိုးမြိုးမြတ်မြတ် အကျိူးအ မြတ် အဖူးအငုံလေးတွေ ကို အထိခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီကဏ္ဍတွေမှာ တကယ်တမ်းရင်းနှီးမြုပ်နှံ ထားကြတာက နိုင်ငံတကာ က ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ အခုလို အလှုပ်အရှားလေး ဖြစ်သွားတာ လောက် နဲ့တင်ကို ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် အနေအထားတွေမှာ ထိခိုက် မှုလေးတွေ ရှိလာတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီ ကြီးတွေကလည်း ဒီနှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ အပေါ်မှာ ရှိထား တဲ့ သြဇာအရှိန်အ၀ါဟာ အမေရိကန် ၊ တရုတ် တို့ ထက် မလျော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လည်း စစ်ဖြစ် ဖို့ ဆိုတာ ဟာသသက်သက်ပဲ။
၃။ လက်ရှိ အိန္ဒိယ မှာ အသစ်စက်စက် အာဏာရလာတဲ့ ဘာရတီယာ ဂျနာတာ ပါတီ အနေနဲ့ ကတော့ စစ်ဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါစေ ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိမှာ အမှန်ပဲ။ အိန္ဒိယဟာ အစဉ်အလာအရ တရုတ်ရဲ့ ဒေသတွင်း ပြိုင်ဖက် ဖြစ်လို့ တရုတ်အကြပ်ရိုက်မယ့် ကိစ္စ မှန်သမျှ အတွက် ကျေနပ်နေမှာ ဖြစ်သလို အခု ရခိုင်ကမ်းလွန်ကထွက်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို တရုတ်ပေးတဲ့ဈေးထက် ပိုပေးပါ့ မယ်၊ သူ့ကို ရောင်းပါလို့ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် တိုးလျှိူးတောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ကို အဖက်မ လုပ်ဘဲ တရုတ်ကိုသာ မြန်မာက ရောင်းလိုက်တာကို သူတို့ လုးံဝ မကျေနပ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဒေ သတွင်းဗရုတ်သုက္ခတွေ ဖြစ်လာလို့ရှိရင် ၀မ်းအသာဆုံး ဖြစ်မယ့်သူဟာ အိန္ဒိယ ပဲ။ သို့ပေမဲ့ သူဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်စေချင်ချင် သူ့ကို တစ်ဖက်က အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ နိုင်ငံ တွေလို သူနဲ့ အကြီးအကျယ်စီးပွားဖက် အင်အားစုတွေက ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နဲ့ ပြန်ထိန်းထားမှာမို့ ဒါကလည်း အညှောက် လုပ်တာလောက်ပဲ လုပ်ချင်လုပ် နိုင်မယ်။ ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူး။
၄။ အမေရိကန် နဲ့ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား အနောက်ဥရောပ နိုင်ငံတွေက တရုတ်ကို အကြပ်ရိုက်စေဖို့၊ လက်ရှိ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာ တရုတ်က ငပွကြီး လုပ်နေတာကို တန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဒီဒေ သမှာ ရှုပ်ရှု့ပ်ထွေးထွေး ဖြစ်သွားတာမျိူးကို လိုလားကောင်လိုလားတာ ဖြစ်ပေမယ်လိုက တကယ် သာ စစ်ပွဲက စဖြစ်သွားပြီဆိုရင် နှစ်ဖက် အကျိူးစီးပွား တွေဖက်က အင်အားကြီးတွေပါ ပါလာပြီး ရေရှည်စစ်ပွဲ အဖြစ် ပေရှည်သွားနီုင်တာမို့ သူတို့ ကိုယ်တိုင် စီးပွားရေး နာလန်ထမှု့ အတွက် မနည်း ရုန်းကန်နေရတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေ ကလည်း ရေရှည် ပဋိပက္ခ ထဲကို မပါလာချင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒါဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။
ဒီတော့ ဘင်္ဂလားနဲ့ မြန်မာ စစ်ဖြစ်မယ် ဘာညာဆိုတာက လူပြိန်းကြို့င်္ ခန့်မှန်းချက်သက်သက် ထက် ဘာမှမပိုဘူး။
Posted in: သတင်း, ဆောင်းပါး	Post navigation
Popular Post	သန်လျင် GTC အတွဲ၏ ဗီဒီယို အွန်လိုင်း ပေါ်တင်သူကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်	မြန်မာ အင်တာနက် ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် မြန်မာ ၀က်ဆိုဒ် လေး တွေ	အောင်ဆန်းစုကြည် ဘဝဇာတ်ကြောင်း ဘဝ မှတ်တမ်း	ပလေတိုရဲ့ ဖင်တုံးလုံးကျောင်း၊ မသီတာအေး နှင့် ညို့ မဂ္ဂဇင်း	နေမျိုးဝေရဲ့ အဓမ္မကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ပန်းသည်လေး နန်းမိုးလျှံရဲ့ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံမှု	ညွှန်မှူးယောက်ဖကို ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ၀ိုင်းဖမ်း၊ မြင်းဆေး ၆၆ ပြားတွေ့ Recent Posts	ကန့်ကွက်မှုများရှိနေသော်လည်းအဖြူ ကဒ် ကိုင်သူများ မဲ ပေး ခွင့် ရှိ မည်
ရေသန့်ဘူးခွံများတွင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေ နိုင် သော ဒြပ် စင် တချို့ ပါ ဝင် နေ
အမေရိကန်ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးပိုမိုတင်းကျပ်ဖို့ အစီ အစဉ် သစ် သမ္မတ အိုဘားမား ကြေညာ
ချက်လက်မှတ်ပေါ်တွင်လက်မှတ်တုထိုးပြီး ငွေကျပ် သိန်း ၂၅၀၀ လိမ် လည် ထုတ် ယူ မှုဖြစ် ပွား
‘‘ရေရာသေချာတဲ့သဘောတူညီချက်အာမခံချက် ဘာ မှ မ ရ ခဲ့ ဘူး’’
ပဲရစ်မြို့ တိုက်ခိုက်မှုများကြားမှ ဒုတိယမြောက် မွတ်စလင်သူရဲကောင်း
အိုဘားမား၊ မစ်ရှဲလ် တို့ရဲ့ ညစာ နဲ့ အချစ် ဇာတ်လမ်း
စစ်တွေမြို့ရှိ အောင် မင်္ဂ လာ ဒုက္ခ သည် စ ခန်း ရိက္ခာ ကား အား ပိတ် ပင်…
နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးသို့ ပါလက်စတိုင်း ဆက်သွယ်ခွင့်ရပြီ
မွတ်စလင်ဝတ်စုံဖြင့်ခြေမျက်စိဖော်ခဲ့သည့် ဆလီနာ ဂိုမက်ဇ် လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာမှ ဓာတ်ပုံ ကို ပြန် ဖြုတ်
Geroge Soros နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတကာ မိသားစုရဲ့ အသံကို နားထောင်ပါ
ပြည်သူ့စစ်နှင့်နယ်ခြားစောင့်တပ်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် မှောင်ခို စီးပွားရေး မပတ်သက် ရန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တိုက်တွန်း
ချင်းမိုင်- ရန်ကုန် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းသစ်ပြေးဆွဲနေပြီ
MPT က ဖုန်းပြောခများလျှော့ချ၍ မက်ဆေ့ခ်ျနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခ အသစ်များကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး သံအရာရှိ ပါမောက္ခ ယန်ဟီလီ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ဆိုက်ရောက်လာ
အင်ဒိုနီးရှားရောက်ကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဆက်ရှိ နေသမျှ မြန်မာ ကို အမေရိကန် မှ ကူညီ ပံ့ပိုး မည်
ရိုဟင်ဂျာတို့ ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် လျှောက်လွှာ များ စတင် လက်ခံ စိ စစ် မည်
ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကို အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအား သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ရှင်းပြခဲ့
MECTEL ဆင်းမ်ကတ် များ အတွက် နှစ်ကူး လက်ဆောင် အပိုထပ် ဆောင်း ပေး မည်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ အရဲရင့်ဆုံး မွတ်စလင်များ
The Interview ရုပ်ရှင် ရုံတင်ပြ သရန် ပြန် လည် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ခြင်း ကို အိုဘားမား ကြို ဆို
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပေရှာဝရ် စာသင်ကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမားများမှာ မွတ်စလင်မ်များ မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ
ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးကြီးဘရှင် (၁၉၁၄-၁၉၇၀)
ကြံရည်ကြိုက်သူများသတိထား၊ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက် များ စွာ ပါ ၀င်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ(၁၃)ရာခိုင်နှုန်းသောဘယ်သန်ထဲတွင် အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ် တွေလို့ ဂုဏ် ယူ တယ်
ရေနံသိုလှောင်ကန် ဖျက်ဆီးမှု လက်ဘနွန်အား လျော်ကြေး ဒေါ်လာ သန်း ၈၅၀ အစ္စရေး ပေးရန် ကုလ ဆုံးဖြတ်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လေယာဉ် – Antonov An-225
အကြမ်းဖက်သမားများကို ခုခံသည့် ကမန်မွတ်စလင်မ်များကုို ပြင်းထန်သည့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
ရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်ချမှတ်ဖို့ အိုဘားမား ပြင် ဆင်
ရိုဟင်ဂျာ၊လူမျိုးရေးလား၊ ဘာသာရေးလား ?
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟီဘေးခရိုင်မှာဗီယက်နမ် အမျိုးသမီး ၁၀၀ ကျော် ပျောက် ဆုံး နေ
နာမည်ကျော်ထိုင်းသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး အစ္စလာမ် သာသနာသို့ ကူးပြောင်း သက်ဝင်
၂ နှစ် အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် စင်္ကာပူမှ ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းတန် Jurong ဗလီဝတ်ကျောင်း
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီရေးတွင် တူရကီ ကမ္ဘာအဆင့် ၁ သတ်မှတ် ခံရ
ဘရာဇီးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်မုဒိန်းမှုသတင်းအားမလေးရှား တွင် မြန်မာ မိန်းကလေး မုဒိန်းကျင့် ခံရ သည် ဟု လုပ်ကြံ ၀ါဒ ဖြန့်
အင်ဒိုနီးရှားမှာ တွေ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ အစောဆုံး ရှေးဦး လူသား ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်နိုင်
အမျိုးသမီးအရေးတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ပြောကြားမှု အပေါ် မွတ် စလင် မိခင်များ အမြင်
သံဃာအတုနှင့်သာသနာ့အရေခြုံ အလှူ ခံသူများကို ဖမ်းဆီးမည့် စီမံချက် စတင်
ဘာသာခြားကဝိကျော်ပညာရှင်တို့၏တမန်တော်မြတ် “မုဟမ္မဒ်” (PBUH) အပေါ် သဘော ထားများ
စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထမင်း စား ဖိတ် ခေါ်ဦး မည်
လစ်ဗျားတွင် IS တပ်ဖွဲ့၏ အခြေစိုက် လေ့ကျင့်ရေး စခန်း တစ်ခု ရှိလာကြောင်း အမေရိကန် ပြောကြား
အစ္စလာမ်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးသာသနာ၊ကုရ်အာန်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကျမ်းစာဟု ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီးပြောကြား
Burmese Version (59)
English Version (44)
June 2013 (219)
February 2013 (249)
January 2013 (384)
လာဖတ်သောဧည့်သည်ပေါင်း	521,436 hits
လာဖတ်သောနိုင်ငံ့အလံ	Burma Muslims’ Pages	ဗုဒ္ဒေါမောကန် (ရေးသူ- ဒေါက်တာ သန်းထွန်း)
မှတ်တမ်းများထဲက ရိုဟင်ဂျာ (၃)
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ ( အပိုင်း ၁ – ၂ )
မြန်မာသမိုင်းတွင်ရိုဟင်ဂျာများသည်တိုင်းရင်းသား လူမျိုး စု တ ခု အဖြစ် ရပ် တည် ခဲ့
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှ ဖျောက်ဖျက်မရမည့် ခေတ် အဆက်ဆက်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ
၁၈၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် “ရိုဟင်ဂျာတိုင်း သားများ” ရှိခဲ့ကြောင်း မငြင်းနိုင်သော သက်သေအထောက်အထား
Short History of Panthay Muslim: ပန်းသေး(တရုတ်မူဆလင်) အမျိူးသားများဆင်းသက်လာပုံသမိုင်း
The Best Doccuments of Rohingyas in Burma, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)
The Rohang Land ( By Aung Min, LL.B)
THE ROHINGYA IS THE OLDEST INDIGENOUS NATION OF OCCUPIED ARAKAN